Inqubomgomo yethu yokuvimbela i-COVID-19 - hannari-shop
Umgomo wethu wokuvikela i-COVID-19
Ikhasimende Elibaluleke Kakhulu,
Sizwa sicabange kabuhlungu ngemiphumela yegciwane le-corona ku-
umhlaba, abantu abangenwe yileli gciwane, nabantu ababazungezile. Futhi kufanele kube nzima ukuthi uphile impilo engalungile, ikakhulukazi kwezinye izindawo ku-shutdown.
Ihhovisi lethu lisendaweni yaseKagawa Prefecture eJapan, lapho kungakaze kuvinjelwe khona.
Ngokuphathelene nesimo sebhizinisi, manje sesikwazi ukuphendula ngokuhleleka kuya ukuthunyelwa ngaphandle kokubambezeleka noma izinkinga kahle. Futhi, njengoba sihlala senza, senza izibulala-magciwane ngenani elandelwa le-ozone ukuze silethe imikhiqizo kumakhasimende asesimweni esihlanzekile.
Siyethemba impilo enempilo izobuyela kumakhasimende ethu ngokushesha okukhulu.